Sandals Resorts mahita famandrihana fialan-tsasatra mihoatra ny isa mialoha ny COVID
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Sandals Resorts mahita famandrihana fialan-tsasatra mihoatra ny isa mialoha ny COVID
Ny filoham-pirenena Sandals, Adam Stewart, dia niresaka momba ny fiakaran'ny vidin'ny fialan-tsasatra Karaiba 25% amin'ny taona 2019.
Sandals Resorts dia mihoatra ny isa famandrihana mialoha ny COVID amin'ny isan-jato 25 isan-jato.
Amin'ny 2019 no iray amin'ny taona tsara indrindra amin'ny dia ary azo antoka fa ny taona tsara indrindra ho an'ny Sandals, dia tampina ireo isa ireo.
Mampiseho ny fifandraisan'ny vaksiny io ary ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra eto an-tany.
Stewart dia nilaza tamin'i Varney & Co. tamin'ny talata fa ny Sandals Resorts dia efa nahita famandrihana fialan-tsasatra 25% bebe kokoa tamin'ny 2021 noho ny tamin'ny areti-mandringana talohan'ny COVID tamin'ny taona 2019.
Hoy i Adam: “Very ny fialan-tsasatry ny olona. Very ny fahalalahana hivezivezy izy ireo noho ny zava-misy amin'ny areti-mandringana, ary ny zavatra hitantsika ankehitriny dia fitomboana lehibe indray.
“Maneno ny telefaona, manodidina ny 25% ny antso azonay ary ny fivezivezinay noho ny taona 2019 izay iray amin'ny taona tsara indrindra nitetezana ary azo antoka fa ny taona tsara indrindra azonay, ka tena nampientam-po tokoa teto Karaiba.
“Mampiseho anao ny fifandraisana misy eo amin'ny fanaovana vaksiny; mampiseho izany fa ny dia dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra eto an-tany; mampiseho anao amin'ny fomba hafa io.
“Nankafy an'i Karaiba ny olona, ​​akaikin'ny Amerika izany, ary mahita 25% mahery isika izao noho ny hafainganan'ny famandrihana. Lazaiko mazava amiko fa vonona ny hifindra ny olona. Very ny fahafahany [mijanona eo amin'ny toerany].
“Tian'izy ireo ny fialantsasatry ny fahavaratra. Nahita riaka goavambe ho an'ny fahavaratra izahay. Ary, mazava ho azy, miankina amin'ny marika itokisany izy ireo, ary kapa dia nitarika an'io Karaiba io tao anatin'ny 40 taona lasa. ”
Vaovao misimisy momba ny Sandals.
Tsy misy karantina ho an'ny Phuket manomboka ny 1 Jolay
Arabia Saodita dia voamarina ho firenena mpiara-miasa ofisialin'ny ITB India 2021